Kutholwe isidumbu esinqunu emfuleni | News24
Kutholwe isidumbu esinqunu emfuleni
KUSAYIDINDA ukutholakala kwesidumbu sowesilisa emfuleni i-Duzi ngeSonto ekuseni mhla ziyi-8 kuNtulikazi (July).
Lesi sidumbu sowesilisa sitholwe sintanta emanzini abantu ekade begijima ngezikhathi zehora lesi-8 ekuseni.
Lona wesilisa kuthiwa isidumbu sakhe sitholwe sinqunu kanti bese siqala nokubhicika isikhumba okukhombisa ukuthi kunesikhathi eside sahlala emanzini.
Abantu abasebenza ngakulendawo bathi namanje basathuswe ukutholakala kwesidumbu.
Omunye umsebenzi oseben- zela ngakule ndawo uthe okubethusa kakhulu ukuthi zonke izinsuku kuhlezi kunabantu abadobayo kulo mfula, okubaxakayo ukuthi kungani bengazange basibone lesi dumbu kusanesikhathi.
“Sesicabanga nokuthi mhlampe lesi sidumbu sisuka kwenye in- dawo saze safika lana, ngoba bebe ngeke nje bangasiboni eku-beni badoba kulo mfula zonke izinsuku.
“Akubona nje kuphela abantu abadobayo abasebenzisa lo mfula, baningi abantu abawusebenzisayo kuyasethusa ukuthi sizwe sekuthiwa kutholakale isidumbu esesibucuka kule ndawo,” kubeka lo msebenzi ongathanda ukudalula igama lakhe.
Okhulumela amaphoyisa esiteshini i-Alexandra uKapteni Kholeka Mhlongo uthe imbangela yokufa kwalona wesilisa ayika- ziwa kodwa kusolakala ukuthi ubulewe.
Uthe: “Ubene zimbobo ekhanda kanye nasendlebeni yakweso- kudla.
“Umzimba wakhe futhi ububukeka engathi uqale washiswa ngaphambi kokuba uphonswe emfuleni,” kubeka yena.
UKapteni Mhlongo uthe kusolakala ukuthi lesi sidumbu sesiqede izinsuku eziningi sise manzini.